Borlänge: Ururka UMIS muxuu kaga duwan yahay ururada kale [Video] | Somaliska
Af-Soomaali / Wareysiyada
Borlänge: Ururka UMIS muxuu kaga duwan yahay ururada kale [Video]
Maalintii sabtida waxaan booqasho gaaban ku tagay magaalada Borlänge ee gobolka Dalarna taasoo sanadihii dambe noqotay goob ay Soomaalidu aad u dageen. Borlänge ayaa lagu qiyaasaa Soomaali ku dhow 2000 in ay ku nool yihiin.
Sida caadada ah marka Soomaali ay magaalo isugu tagaan waxay abuurtaan jaaliyado ka shaqeeya danahooda, marar badan jaaliyadaas waxay dhaliyaan qilaafyo iyadoo ay dhacdo dhowr layska garab dhiso. Magaalada Borlänge waxaa ka dhisan dhowr jaaliyadood balse mid ka mid ah ayaa waxaa isoo gaaray amaantooda. Ururka Midnimada Soomaaliyeeed (UMIS) waa jaaliyad laga dhisay magaalada Borlänge sanadkii hore.
Waxaan wareysi la yeeshay afhayeenka ururka Maxamed Maxamud Guure, isagoo iiga waran qaabka uu u shaqeeyo ururka UMIS.
Dhinaca kale goobta wareysiga waxaa ka socday bandhig buugaag Soomaaliyeed oo lagu soo bandhigay nuucyada kala duwan ee buugaagta ay qoreen qorayaal Soomaaliyeed oo ku dhaqan Sweden.
Somaali lagu dilay weeraradii ka dhacay dalka Norway
Facebook oo lagu tilmaamay balwad
Asc , halkaan goobjooge yaan ka ahaa , runtiina waxaan arkay wax i farax geliyay , maxaa yeelay waxaan ku qaadanay Waanooyin badan oo Qorayaasheena Soomaaliyeed na dhaxalsiiyeen , haddii uu Ahaan lahaa
Qore : Maxamed X. Guulee ( Cabdibashiir )
Qore : Yuusuf X. Cabdullaahi Xassan ( Sheekhul Casri)
Qore : Sayid Maxamuud Yusuf ( Dhegeey)
Qore : Muuse Maxamuud Ciise (Dalmar).
Qorayaasheena sare waxay na geliyeen yididiilo sare , waxayna nalaga taliyeen dibindaabyada afkeena hooyo.
Ugu danbays halkaa waxaa lagu soo badnhigay buugaag boqolaal gaaree , runtiina dhammaantood waa la wada iibsaday waxa kasoo haray waa uun dhawr iyo toban buug oo aan filaa in ay dadku horay u aqristeen.
Guntii iyo gaba gabadii , waxaad moodaa waayahaan danbe in magaaladaa Borlänge ay , ku feer socota ama la dhabiiltamee 4 magaalo ee ugu waawayn Sverige maxaa yeelay Sheekha imaada magaalooyinka waawayn waan u wacanaa , aqoon yahan la mid , iyo Qorayaasha , welibana waxaan gedi magaalooyinkaa dheerna waa ina oo leh , hal madax hal urur oo nagoolo soo hagaago , haba iska jiraan laba qof oo gees u daaqa , maahanse wax hadda jaaliyad laga soo qaado .
June 7, 2011 at 05:19
Maxaad beenta u sheegaysaan ururkaan waxay yihiin waan naqaaan sxbow Borlänge waa daganahay in la xayasiiyana loo ma baahna tuugo waaye sxb kuwaan umada ayay rabaan in ay wax ku cunaan marka beenta dadka ha laga daayo umada caadifada qabiilkana ha la iska daayo waxa ay xumeeyeena waaa la ogyahay
June 7, 2011 at 07:34
Waxaa been sheegaya qofka masabidanaya qof waxbo aan ka haleynin. Waana waxa somaalida hormarka u diiday dhulkii iyo wadankiina gubnay.
Waxaa wanaagsan qofka in waxa uu ku andacoonaya ku saleysan yihiin xaqiiqo, ee hadii kaliya uu la hadaaqo nin naceyb ama jecleysi runtii xaalada waxbo kama badaleyso.
Waxaan walaaha soomalida ah ka codsan lahaa in ay ka ilbaxaan qabyaalada iyo xumaanteeda. Waa fududahay in wax la mucaaraado laakiin waxaa ka wanagsan in qofka uu la imaado wax badala waxa uu mucaaradayo.
June 7, 2011 at 20:05
Masha Allah aan dhihi karaa. Waxaa filaa in ururkan ay usugu tageen dad aqoon leh sida aan maqlay waana wax wanagsan ayaan dhihi karaa. ururo badan ayaa ka jiro magalada Borlänge balse waa ururo dad shaqsiyaad ah lee yihii. Waalaalkey Abdi hadii aad reer Borlänge tahay ma ogtahay in UMIS markii la dhisaayay aan lagu dhisin qaabka somalid wax loogu dhiso ee 4,5 ama qabiilka. Waana tan keentay in dad badan oo qabiilka ku qaraabto in ay ka caroodaan abdhismeedka ururka.
Salaam ,waxaan aad ugu hanbalyaynayaa somalida Borlänge waa nasiib badan yihiin ,haday ogaan lahaayeen Västrås dadka dagan ee somaliyeed xitaa kubada qabiil qabiil ayay u dheelaan marka waan dareemi karaa dadbadan oo qabiil inta quful ku jabiyay aad ooga carooday in ay jaliyada somaiyed yelato dad aqoonyahana ah oo u horkaca wanaaga ,waxaan maqlay xitaa in aad ururada qaarkood ay casuumeen Itoobiyaan ,Xabasha, ilaahay ku mahadiya ( UMIS) inta wax garadka ahna iskaashada .
July 30, 2011 at 20:59
koronto marexaan says:
guure beenta daa walaal anag ayaa dhisnay anaga ayaa duminayna maadama aad tihiin dad ka soo jeeda islaamiyiin xag jir ah kuna gabada al-islaax oo ah urur diimeed aan ka marnayn siyaasada somaaliya runtii qaladaad badan ayaa ka gasheen dadka borlänge ku nool waxaa samayseen wax aan weli la arkin umadda ka fariista waxaa dadka u heysaan ma jirto hadii kale dacwad idinka dhan ah ayaa loo gudbinayaa poliska gobolka dalarna ama magaalada borlänge in aad tihiin xag jir dadka waxaa u keenten culimo naagta ninka waa furi kartaa
hooyo somaliyeed says:
ass cw waxaan aad oogu hambaliyeynayaah maalintan iyo dadkii soo abaabulay,taasoo ah arin cajiib ah sumcadna u soo hooyisay magaalada Borlänge iyo waliba qoraashaasha somaaliyeed. Soomali hadii aanu nahay waxaa inta badan naga maqan waxa layiraado HADAF(MÅL) hadaba beeylaha iyo qilaafka waxa nagu ridayna waa taas. walaalaha ururka kacabanayow hailobina in ururka loo dhisay dhamaan umada soomaliyeed ee ku nool magaalada Blge iyo duruufahooda farada badan.waxaa mahad u sugnaatay Alle (sw) waxaa sidoo kale u mahad celinayah walaalaha daadihinaya ururkan kuwaas oo dulqaad, aqoon iyo waayo aranimo urur usaaxiib ah, kuwaas oo waliba u nugul dadkooda soomaaliyeed siiba caruurta iyo hooyooyinka. waxeeyna mudanyihiin taageero lixaad leh, halmidna waa iga talo,,,dadka bini adamka ah weey kumidoobi karaan HADAF ayagoo heeysta mabdayo kala duwan sida AL-Islaax,,islaamiyiin xagjira , xagjir qabiil IWM. Ramadaan Kariim.
waxaan aad ugu farax sanahay in walalaha inoo hirgaliyay UMIS si geesinimo leh ay wali hawshii usii wadaan , markaad eegto walalaha utaagan UMIS waaba intii aqon iyo sumcad dhan walba ka dhisnayd , hadaan usoo laabto raga nolosha hurmarkeedii ka istaagtay ee dhanwalba ku soo guul daraystay layaab malahan in ay ku calwasaadaan maxaa waxloo qabtay , waxbaa nalaku cunay, waa nala dhacay . gabagabdii waxaan kula talinayaa dadkaas in ay isdaba qabtaan oo aysan noqon sidii uu yiri gabayaagii ( oonbaa idiloo biyaan ku agwareegaayay) wadankaan waxaa uu kuu sahlay cun cab waxbaro , intaa hadii ay ruuxa anfici wayday hadee waa nin bali biya ah oon ugu ag go`ay.